“လာစမ်းပါ ကင်​ဆာလို့ စိန်​​ခေါ်ပြစ်​လို့ရပါတယ်​.. များများ မြန်​မြန်​ Share ​ပေးကြပါ။” – Askstyle
“လာစမ်းပါ ကင်​ဆာလို့ စိန်​​ခေါ်ပြစ်​လို့ရပါတယ်​.. များများ မြန်​မြန်​ Share ​ပေးကြပါ။”
များများ Share မြန်​မြန်​ Share ​ပေးကြပါ
(( ကင်​ဆာ​ရောဂါအတွက်​ ​ဆေးစွမ်း​ကောင်း ))
နုနု ရင့်​ရင့်​ ကင်​ဆာမှန်​သမျှ​သောက်​လို့ရတယ်​
​ရောဂါသက်​သာမယ်​ ​​ရောဂါပျောက်​မယ်​ ”
အဆုပ်​ကင်​ဆာ ၊ အစာအိမ်​ကင်​စာ အသားအိမ်​ကင်​ဆာ အိုဗျာ ကုန်​ကုန်​​ပြောမယ်​ ဘာကင်​ဆာဖြစ်​ဖြစ်​ အကုန်​သက်​သာ​ပျောက်​ကင်းပါတယ်​လို့ ၉၂ % အာမခံပါတယ်​ ကြာတယ်​လက်​​တွေ့လုပ်​ကြည့်​ပါ
သ​င်္ဘောအဖိုပင်​ရဲ့အရွက်​ကို ​ရေစင်​​အောင်​​ဆေးပါ အရည်​ရ​အောင်​ညှစ်​ပါ ​ရလာတဲ့အရည်​ ( သတ္ထုရည်​ ) ကို ရေ​နွေးအကြမ်းပုဂံနဲ့ မနက်​ ပုဂံတစ်​လုံး ည ပုဂံတစ်​လုံး ​သောက်​​ပေးပါ ၁၅ ရက်​ ရက်​ ၂၀ ​လောက်​ ​နေ့စဉ်​​သောက်​ပါ ထူးချားပါမည်​ ။
တစ်​လ​ကျော်​​သောက်​ပြီးရင်​ ကင်​ဆာ​ရောဂါသမား​တွေ ထ​ပြေးလို့ က​နေလို့ရပါပြီလို့​ပြောရ​လောက်​​အောင်​ကို ​ဆေးစွမ်းက ထက်​လှပါတယ်​ ​ရောဂါ​ပျောက်​ချင်​ရင်​ ခါးတာကိုမ​ကြောက်​နဲ့ခါးမှာမ​ကြောက်​ရင်​ ​ရောဂါ​ပျောက်​ဖို့ အာမခံတယ်​
တန်​ဖိုးသိမှ တန်​ဖိုးရှိတယ်​ဆိုတာ မ​မေ့ပါနဲ့ ။
မှတ်​ချက်​ // မယုံကြည်​ရင်​ မ​သောက်​ပါနဲ့ တရားမစွဲပါဘူး အလကားရတဲ့​စေတနာကို​တော့ မ​စော်​ကားကြဖို့ ​မေတ္တာရပ်​ခံပါတယ်​ ။
ကျုပ်​တာဝန်​​ကျေတယ်​​နော်​ ​စေတနာသန့်​သန့်​​လေးဖြင့်​…. သစ္စာရှင်​ #TSS
ကျန်းမာရေး နဲ့ သင်္ဘောရွက်အကြောင်း
သင်္ဘောပင်၏ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ Carica papaya Linn ဖြစ်ပြီး မျိုးရင်းမှာ Caricaceae ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင်. Papaya , Papaw ဖြစ်သည် ။
သင်္ဘောရွက် ၁၀၀ ဂရမ် ( ခြောက်ကျပ်တစ်မတ်သား) မှာ ကယ်လိုရီ ၇၅ ၊ ပရိုတင်း ၆.၁ ဂရမ် ၊ထုံးဓါတ် ၃၃၅ မီလီဂရမ် ၊ သံဓါတ် ၂၅ မီလီဂရမ် ၊ ဗီတာမင် အေ ၂၀၃၀၀ IU ၊ ဗီတာမင် စီ ၂၆၄ မီလီဂရမ် ၊ ကစီဓါတ် ၁၂.၇ ဂရမ် ၊ အဆီဓါတ် ၂ ဂရမ် ၊ နိုင်ယာစင် ၂.၁ မီလီဂရမ် ၊ ဗီတာမင် ဘီဝမ်း နဲ. ဘီ၂ တို.လည်းအနည်းငယ်ပါဝင်နေတယ်လို.ဆိုပါတယ် ။
သင်္ဘောရွက် ၊ သင်္ဘော သီးစိမ်းနဲ. အမှည်.အားလုံးအနက်မှာ သင်္ဘောရွက်ဟာ ပါဝင်ဓါတ်အများဆုံးပါပဲ ။
တိုင်းရင်းဆေးအယူအဆမှာတော. သင်္ဘောပင်ဟာ လေကိုပျက်စေသည် ။ မီးယပ်ကိုမှန်စေသည် ။ ဆီးကို ရွှင်စေသည် ။ သွေးကို စင်ကြာ်စေ၍ သည်းခြေအပူကို ငြိမ်းစေသည် ။
၀မ်းမီးတောက်စေ၍ အစာကိုကြေညက်စေသည် ။ ဆီးရောဂါနှင်. ဆီးကျောက်တည်ရောဂါ တို.ပျောက်စေသည် လို.ပြောထားပြီး သင်္ဘောရွက်ကို မီးမြှိက် တို.စားရင် လေထိုးလေအောင်. သက်သာစေပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ.အပြင် ပင်လယ်အူနာ ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ခံတွင်းပျက်ရောဂါ တွေသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်တဲ့ ။
လဘက်သုတ်မှာ သင်္ဘောရွက်ကို မီးအုံးပြီး ထည်.စားရင် လက်ဖက်ကြောင်.ဖြစ်တဲ့ လေနာနဲ. အိပ်မပျော်ဖြစ်ခြင်းတို. သက်သာစေပါတယ်တဲ့ ။ နားအူ ၊ နားလေး ၊နားကိုက် ၊နားလေထွက် နာတို.အတွက် သင်္ဘောရွက်ကို နှမ်းဆီလိမ်းပြီး ကပ်ပေးရပါတယ် ။ အနာကြောင်.ရောင်ရမ်းရင်လည်း သင်္ဘောရွက်နဲ. စည်းထားပေးရပါတယ် ။
နို.ချောင်းပိတ်တဲ့ မိခင်တွေအတွက်လည်း သင်္ဘောရွက် မနုမရင်.၅ ကျပ်သား ၊ ဆား ၂ပဲသား ၊ ထန်းလျှက် ၂ ကျပ်သား ၊ ရေ ၁ပိသာ ၅၀ သား မြေအိုးတွင်ထည်.ပြီး ရေ ၁ပိသာကျန်သည်အထိ ကြို အအေးခံပြီးသောက် ရတယ်လို. ဆိုပါတယ် ။
Florida တက္ကသိုလ် ရဲ. ဓါတ်ခွဲခန်း သုတေသန ပြုလုပ်ချက်မှာတော. သင်္ဘောရွက်ဟာ ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်ပြီး အသည်းကင်ဆာ ၊ သားမြတ်ကင်ဆာ ၊ မုန်.ချိုအိတ် ( ဒီစကားလုံးက အင်္ဂလိပ်လိုတော. ပန်ကရိယ လို.ခေါ်ပါတယ် ) ကင်ဆာ အပါအ၀င် ကင်ဆာ ၁၀ မျိုး ရဲ. ကြီးထွားမှုကို တားမြစ်နိုင်ကြောင်း တွေ.ရှိထားတယ်လို.ဆိုပါသတဲ့ ။ ဒါ.အပြင် ဘက်တီးရီးယား ၊ ဗိုင်းရပ် (စ်) ပိုး စတာတွေ ဖျက်စီးပစ်နိုင်တဲ့ ခန္ဒာကိုယ်တွင်းဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်မှု ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာ ။
ဒါ.အပြင် အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်လေ.ရှိတဲ့ ဆီးနည်း ဆီးအောင်. ဖြစ် ၊ အဲ့ဒီကနေမှ ကြာလာရင်ကပ်ပယ်အိတ်ပါ လက်သီးဆုတ်လောက်အထိ ရောင်လာပြီး ထိုင်ထ လမ်းလျှောက်ရင် အောင့်ပြီး ခံရခက်တာ မျိုးတွေ ထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော.
သင်္ဘောရွက် အကြမ်းရွက်ကို မီးနဲ့ ကျွမ်းအောင်ကင်ပြီး ရေနွေးဖြူ ပူပူထဲ ခြွေထည့်ပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်ပန်းကန် နှစ်လုံးစာလောက်ကို တနေ့ သုံးကြိမ် သောက်ပေးရပါတယ်။ ခါးလွန်းခြင်း မရှိဘဲ သောက်လို့ ကောင်းတယ်လို.ဆိုပါတယ် ။
သင်္ဘောရွက် အနုကိုတော့ မီးအုံးကင်ပြီး ထမင်းစားတဲ့အခါ တို့စရာလို စားပေးရပါတယ်။ ၂-ရက်လောက် စားပြီးတဲ့အခါ သက်သာလာပြီး ၅-ရက်လောက် သုံးပြီးတော့ သက်သာပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်လို. ကိုယ်တွေ. သုံးဖူးသူတစ်ဦးက နက္ခတ္တရောင်ခြည် (၂၀၀၉ – ဇွန် ) မှာ ရေးသားဖူးပါတယ်
Credit to မှတ်စု